सांसदलाई ६ करोड: घटाउनुको साँटो उल्टै बढाउने तयारी | सुदुरपश्चिम खबर
सांसदलाई ६ करोड: घटाउनुको साँटो उल्टै बढाउने तयारी
काठमाडौं । कोरोना महामारीका बेलामा पनि सरकारले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ (सांसद विकास कोष) का लागि बजेट छुट्याउने तयारी गरेको छ । सत्तापक्षकै सांसदहरुको दबाबका कारण सरकारले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन लागेको हो ।
गत वर्ष पनि बजेटको तयारी भइरहँदा ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ विवादास्पद बनेको थियो । निर्वा्चित सांसदहरुमार्फत विकास गराउने भन्दै यस शीर्षकमा बजेट छुट्याउने तयारी भइरहँदा गत वर्ष नै यसको विरोध भएको थियो । अर्थ्विददेखि लिएर केही सांसदहरुले नै यसको खुलेरै विरोध गरेका थिए ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ६ करोड रुपैयाँका दरले हुने गरी सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६र७७ का लागि गत वर्ष बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
यो कार्यक्रमअन्तरगत सांसदले ६ करोड पाउने भनिए पनि उनीहरुले व्यक्तिगत स्तरबाट यो रकम खर्च गर्न भने सक्दैनन् । यसका लागि संघीय प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वा्चित सांसद संयोजक रहेको समिति हुन्छ, जसमा दुबै सभाका समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसद सदस्य हुन्छन् । साथै, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखका एवं स्थानीय तहका प्रमुख पनि यसमा सदस्य रहन्छन् । सोही समितिले योजनाको छनोट गर्छ ।
परियोजना छनोटका क्रममा सांसदको एकल तजबिज त रहँदैन, तर समितिमा विवाद भएको अवस्थामा भने प्रत्यक्ष निर्वा्चित सांसदले अन्तिम निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था संसदीय विकास कोष निर्दे्शिकामा छ । सोही निर्दे्शिका अनुसार यो रकम परिचालन हुन्छ । संविधानले तीन तहको संरचनाको परिकल्पना गरेका अवस्थामा यो कार्यक्रमले जिल्ला समन्वयन समितिलाई बजेट परिचालनमा सक्रिय भूमिका दिएको देखिन्छ ।
उनी अगाडि भन्छन्, ‘हुन त कसै(कसैले मैले अस्पताल बनाएँ पनि भन्ने गरेका छन् । कसैले मैले विद्यालय बनाएँ भन्ने गरेका छन् । विद्यालय, अस्पताल बनाउन पैसा पठाइदिए भइगयो नि । बजेट खर्च गर्ने निकाय सांसद हो ? योजना छनोट गर्ने निकाय सांसद हो ? योजना छनोट गर्ने काम योजना आयोगले गर्छ । बजेट खर्च गर्ने काम कार्यपालिकाले गर्छ । यति कुरा सामान्य कुरा हो । भ्रष्टाचार धेरै हुने देशको लिष्टमा यो प्रक्रिया चल्छ । सांसदलाई बदनाम नगराऊँ भन्ने मेरो कुरा हो ।’
नेकपाका यी सांसदहरु महामारीका बेलामा पनि आगामी बजेटमा समेत ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ (सांसद विकास कोष) लाई यथावत राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । र, सत्तापक्षका सांसदहरुको यही दबाबका कारणले यो कार्यक्रमलाई दिने तयारीमा सरकार लागेको स्रोतले बतायो ।-अनलाईन खबर